Beriziky Jean-Omer : kivy, diso fanantenana amin’ny mpitondra ny rehetra | NewsMada
Beriziky Jean-Omer : kivy, diso fanantenana amin’ny mpitondra ny rehetra
“Fahakiviana no tena betsaka, fahadisoam-panantenana no iainan’ny rehetra. Efa niala tamin’ny krizy isika: nanantena zava-baovao, fandrosoana haingana sy mirindra. Nefa azo lazaina tsy amim-pihambahambana amin’izao fotoana izao: tsy misy tanteraka izany zavatra rehetra izany.”
Io ny fanehoan-kevitry ny eo anivon’ny hetsika Mitsanganà ry Malagasy sady Praiministra aloha, Beriziky Jean-Omer, teny Andrainarivo, afakomaly, manoloana ny toe-draharaham-pirenena. Raha ny kabarin’ny filohan’ny Repoblika tamin’ny nandraisany fahefana teny Mahamasina, ny 25 janoary 2014: nanantena ny rehetra, fa maro no nolazaina tao. Miendrika fandaharanasa hotanterahina rahateo ny kabary.
“Malahelo aho milaza fa tsy tanteraka izany fandaharanasa izany, amin’izao antsasa-dalana amin’ny fe-potoam-piasana izao”, hoy izy. Na ny fampiasana ny vola avy any ivelany, raha misy; na ny fanomezan-toky ireo mpampiasa vola avy any ivelany, mety hitrandraka ny harena eto amintsika: tsy misy mandeha izany hatramin’izao. “Ny fahitako azy: tsy miroso isika, fa toy ny mihemotra”, hoy ihany izy.
Tsy mangina ny hetsika Mitsanganà ry Malagasy
Tsy mangina ny hetsika Mitsanganà ry Malagasy. Mitohy ny fivorian’ny mpitarika sy ny fitenenana amin’ny fampahalalam-baovao. Tsy mijanona ny asa, araka ny nambarany. Misy fotoana tsy maintsy anajana ny zava-misy eto amintsika: ny fanadinana misesisesy amin’izao fotoana izao.
Tsy tsara ny manao hetsika mety hampisavorovoro sy hanakorontana ny fisainana. “Tsy hoe hanakorontana sy hanasavorovoro izahay”, hoy izy. Izay no mahatonga azy ireo miasa any ambadibadika any, fa tsy mampiseho zavatra be mety haningotra ny saina amin’ny fotoana tokony hahatony ireo mpanala fanadinana.
Anisan’ny nanome voninahitra ny famaranana ny filankevi-pirenen’ny Leader Fanilo izy, ary mijanona ho namana akaiky amin’izany.
Hafanafana indray izany ny tontolo politika amin’ny fotoam-pialan-tsasatry ny mpianatra eo, rehefa vita avokoa ny fanadinana?